Ejipta · Novambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Ejipta · Novambra, 2011
Tantara mikasika ny Ejipta tamin'ny Novambra, 2011
Ejipta: Miteraka Fanontaniana Momba An'i Etazonia Ny Entona Mandatsa-dranomaso Tonga Tamin'ny Sambo
Etazonia 30 Novambra 2011
Nampisavoritaka ny mpiondana aterineto ny fahatongavana entana miaty baomba mandatsa-dranomaso tao Ejipta avy any Etazonia. Naman'ny Revolisiona Arabo vei Etazonia sa mpanohana ireo Arabo mpanao jadona?
Ejipta: Fitsaram-bahoaka Ho Fiatrehana Ny Habibian'ny Polisy
Ady & Fifandirana 25 Novambra 2011
Navoakan'ireo mpampiasa ny media sosialy ao Ejipta ny mombamomba ilay manampahefana ao amin'ny polisy voampanga ho nanao ny mason'ireo mpano hetsi-panoherana ho lasibatra. Mitatitra ny fipongaran'ny fitsaram-bahoaka maro samihafa ao amin'ny firenena i Tarek Amr.
Ejipta : Fanaingan-tsoroka Revolisionera Tamin'ny Fametraham-pialanà Kabinetra
Fanoherana 23 Novambra 2011
Ny Kabinetran'i Dokotera Essam Sharaf dia vao avy nanontany raha afaka ny hametra-pialana izy ireo ary ny Supreme Council for Armed Forces(SCAF) na ny Filankevitra Ambonin'ny Hery Mitam-piadiana dia mbola eo an-dalam-pandraisana fanapahan-kevitra na ho ekena ilay fametraham-pialana na tsia. Ho an'ireo mafàna fo sy mpanao hetsi-panoherana niady tamin'ny polisy sy ny miaramila ao anatiny sy ary manodidina ny kianja Tahrir efa ho telo andro izao , dia tsy nitondra zava-baovao teo ambony latabatra ilay vaovao. Ny zavatra tena nangatahan'izy ireo dia ny hialan'ny SCAF eo amin'ny fitondrana ary hanome ny fahefana amin'ny governemanta sivily.
Ejipta : Ireo Fanjakana Kely Ao Cairo
Hehy 23 Novambra 2011
Noheverinao ve izany fa i Cairo dia tanàn-dehibe iray? Ny tena marina, fitambaranà fanjakana kely maro izy io ary tsy mifampiankina . Ao amin'ity lahatsoratra ity, ilay bilaogera Karim Shafei dia manazava amintsika ny tena fomba fihodin'i Cairo.
Ejipta: Miverina Indray Ny Revolisiona!
Ady & Fifandirana 22 Novambra 2011
Maherin'ny 100.000 ireo olona voalaza fa ao amin'ny Kianja Tahrir amin'izao fotoana, ary ny polisy sy ny tafika dia mitohy midaroka ny mpanao fihetsiketsehana mangataka ny fitsaharan'ny fitondràna miaramila ao Ejipta. Anaty ady tsy mitsahatra manenjika ireo olona mitam-piadiana miasa ho an'ny governemanta Ejiptiana ireo mpanao fihetsikesehana hatramin'ny Zoma ary ankehitriny dia mitoetra ho tsy azo hozongozonina ao an-kianja mandra-pivalin'ny fangatahan-dry zareo.
Ejipta: Mitohy Hatrany Ny Fahorian'ireo Bilaogera Ao Amin'ny Tribonaly Miaramila
Fahalalahàna miteny 21 Novambra 2011
Nanapa-kevitra ny Tribonaly miaramila tamin'ity anio ity fa haiditra am-ponja mandritry ny 15 andro hafa indray ilay bilaogera Alaa Abd El Fattah, 15 andro taorian'ny nitazonana azy voalohany, ka eo am-piandrasana ny fanadihadiana momba izay nolazain'ny mpiaro raha toa ka diso ny fiampangàna nataony. Ny raharahan'ilay bilaogera Maikel Nabil Sanad ihany koa dia nahemotra indray hatramin'ny 27 Novambra.
Ejipta : Fahatsiarovana Ny Faha 40 Taonan'i Papa Shenouda Tao Amin'ny Twitter
Fahalalahàna miteny 19 Novambra 2011
Ireo Coptes Ejiptiana, ankoatry ny hafa, dia nanapa-kevitra nby hanakiana ny Papa Shenouda III, tamin'ny fankalazàna ny faha-40 taona nanosorana azy. Ilay fankalazàna dia nifanandrify indrindra tamin'ny famaranana ny 40 andro fisaonana taorian'ny vono olona tao Maspero, izay nahafatesana Ejitiana 27, ny ankabeazan'ireo maty dia Kristiana "Copte" avokoa.
Ejipta: Nahoana No Hafahana Ilay Bilaogera Alaa Abd El Fattah?
Fahalalahàna miteny 14 Novambra 2011
Mpitsara iray tao amin'ny fitsarana ara-miaramila no hanapa kevitra amin'ity anio ity na hohafahana i Alaa Abd El Fattah na mbola handany 15 andro hafa indray ao an-tranomaizina, etsy andanin'izay dia mbola andrasana ny fanadihadiana ambaran'ireo mpiaro fiampangàna tsy marina. Tao amin'ny Twitter, dia nanambatra ny heviny ireo mpanohana ho an'ny fanafahana azy tamin'ny fanaovana ny tenifototra "#WhyFreeAla." Indreto ny sasantsasany amin'ireo bitsika ampiasàna ity tenifototra ity.
Fahalalahàna miteny 12 Novambra 2011
Vehivavy mpandala ny mahavehivavy Ejipsiana iray no nampiseho ny sariny mitanjaka tamin'ny aterineto hanehoany ny fahalalahany. Miresaka momba ity, araka izay tantarain'i Tarek Amr, ny mpisera Ejipsiana.
Ejipta: Vonona Avokoa Ny Zava-dRehetra Amin'ny Fifidianana Parlemantera 2011
Fifidianana 11 Novambra 2011
Hanomboka ny 29 Novambra ny fifidianana parlemantera. Fantaro ny fombafombam-pifidianana sy ny lohahevitra nifampitafàn'ny mpiserasera amin'ity fifidianana voalohany taorian'ny nanonganana ny filoha teo aloha Hosni Mubarak izay.